Nhau - M. Holland Anochengetedza Kubatana Kuwedzera 3D Kudhinda Zvishandiso Sarudzo
Resin mutengesi M. Holland akazivisa kudyidzana kutsva uye zvigadzirwa kune yayo iri kukura portfolio. Iyo Illinois-based kambani yakabatana nevatatu vatsva ekuwedzera ekugadzira (AM) zvigadzirwa vatengesi kuti vawedzere yavo 3D yekudhinda chigadzirwa chinopa ne50%. Iyo nyowani inobata neAsingagumi Material Solutions, Kimya neArmor, uye taulman3D ichabatsira kudzamisa kuwanika kwezvinhu uye nekupa mikana yakawanda kune vatengi vaM. Holland kuti vabatanidze zvakasarudzika zvekudhinda zve3D mune avo maindasitiri ekuyerera kuyerera. Iko kudyidzana kutsva ikozvino chikamu cheMholland's wide portfolio yevatengesi, kusanganisira zvinhu kubva kumakambani ane mukurumbira seBASF, Braskem, EOS, Henkel Loctite, uye 3DXTECH. Sechikamu chechiziviso, M. Holland akaburitsawo matsva AM zvigadzirwa zvakagadzirirwa machining uye enjiniya kunyorera.
Haleyanne Freedman, weGlobal 3D yekudhinda Injiniya Musika Manager kuM M. Holland, akati musika we 3D wekudhinda wave uchikura nekukurumidza nemichina ichifambira mberi uye ichiwedzera kuita maindasitiri. Zvidimbu zvekudhinda zve3D zvakawedzerawo mumakore mashoma apfuura, saka kambani yakafunga kuvaka AM lab muhofisi yavo yekuNorthbrook kuti vawane akawanda mapuratifomu e3D ekudhinda kubatsira vatengi kuti vanzwisise dhizaini yezvigadzirwa uye zvigadzirwa kudzora nguva yekugamuchira. hunyanzvi.
"Munguva ino yekukura nekukurumidza kune vese indasitiri uye M. Holland's 3D Printing timu, kuwedzera zvine hungwaru vatengesi chinhu chakakosha kupa vatengi vedu huwandu hwakawanda hwezvinhu kuti zvikwanirise mafomu avo," akapa zano Freedman. "Kupa kadhi rakazara rezvinhu zvakakosha kuti vatengi vedu vave nezvinhu zvemhando yepamusoro zvinoita kuti zvive nyore kutora michina yekudhinda ye3D mumabasa avo."
Holland yakasaina chibvumirano chekuparadzira neInfinite Material Solutions, boka rekugadzira zvinhu rinotsvaga kuvaka matanho anojekesa indasitiri yekugadzira. Iri boka rave kuwana iyo AquaSys 120, iyo yakasviba-yakasungunuka filament yakagadzirirwa kutsigira zvikamu zvakadhindwa neepamusoro-tembiricha mapurasitiki, senge polypropylene (PP) uye polyamide (PA), iyo yaimboda tsigiro yakafanana-yezvinhu. Iyo kambani yakati chigadzirwa chakanakira maficha anoda akaomeswa dhizaini uye akaderera mazinga epashure-kugadzirisa, kunyangwe neakanyanya kudhinda tembiricha, ichipa rutsigiro rwepasirese nekunamatira kwakanaka. Yakatengwa pamadhora zana nemakumi masere pakg uye inowanikwa mune ese 2.85 uye 1.75 mm dhayamita, AquaSys120 yakagadzirirwa kushanda neakawanda akasiyana einjiniya-giredhi 3D zvigadzirwa zvekudhinda, zvichigonesa 3D kudhinda kwezvikamu zvakaoma nyore, pasina kukanganisa nezvimwe zvitsigiso zvivakwa
Iye zvino mugovanisi weNorth America waKimya - iri nyowani nyowani kubva kuFrench multinational Armor yakatsaurirwa kugadzira zvigadzirwa zvetsika zveAM - M. Holland apinda muchibvumirano chinosanganisira mhando dzakasiyana dzeABS 3D filaments. Iyo femu ichatanga kushambadzira Kimya's EC (yemagetsi conductive) ABS, iyo inoumbwa neABS Kevlar filament, uye Kimya's PEBA-S 3D thermoplastic elastomer filament. Ichitsigirwa nezvivakwa zveArmor uye R&D, iyo diki, ine akasiyana-siyana kutanga ine kutarisisa kwakasimba pazvinhu zvakagadziridzwa zvezvinhu chaizvo chaizvo zvekushandisa. Inoti zvigadzirwa zvayo zveABS zvinopa kugona kuitisa magetsi kuburikidza nepurasitiki, izvo zvinogona kubatsira mumashandisirwo emagetsi akasiyana.
Wechitatu mudiwa ndiye taulman3D, inogadzira filament iyo inogara ichiburitsa nyowani-yakasimba-yakasimba 3D yekudhinda zvinhu, kusanganisira indasitiri-giredhi yakakwira-simba nylon yakanyatsogadzirirwa 3D mapurinda. M. Holland ikozvino mumwe wevanopfuura makumi maviri taulman3D zvigadzirwa resellers uye ine kuzara kuzere kune chose chigadzirwa chigadzirwa. Izvi zvigadzirwa zvinosanganisira nylon, zvekutsigira zvinhu, copolymers, plasticized copolyamide thermoplastic elastomer (PCTPE), PETT, zvekurapa-giredhi zvinhu, nezvimwe. Iyo kudyidzana ne taulman3D inobvumira vatengi vaM. Holland kuwana kwakapamhama kune zvigadzirwa zvinokodzera zviitwa zvakasiyana siyana.